१ हजार ४२ वर्ष पुगेर गिनिज वल्र्ड रेकर्ड | News Polar
१ हजार ४२ वर्ष पुगेर गिनिज वल्र्ड रेकर्ड
न्यूजपोलार चैत्र २४, २०७७, मंगलबार
ओन्टारियो । बाह्र जना दिदीबहिनी र दाजुभाईको कूल उमेर १ हजार ४२ वर्ष पुगेको एक परिवारले गिनिज वल्र्ड रेकर्ड राख्न सफल भएको छ । गिनिजका अनुसार डि क्रुज परिवारका तिनीहरुको उमेर ७५ देखि ९७ सम्म रहेका छन् । १५ डिसेम्वरका दिन जिवित १२ जना भाई बहिनीको सम्पूर्ण उमेर जोड्दा विश्व किर्तिमान नै राखेको कारण गिनिजले प्रमाण पत्र प्रदान गरेको छ ।
त्यतिवेला सम्म तिनीहरुको कूल उमेर १ हजार ४२ वर्ष र ३ सय १५ दिन पुगेको थियो । ओन्टारियोको लन्डन निवासी ७५ वर्षिया जेनिया कार्टर सबैभन्दा कम उमेरकी हुन् उनले आफुभन्दा जेठा सबैका स्वास्थ स्थिती ठीकठाक रहेको बताएकी छन् । कार्टरले दि लन्डन फ्रि प्रेसलाई बताएकी छन् , ‘ यो किर्तिमान वास्तविक जस्तो देखिँदैन ।
किनभने म सँधैं सबैभन्दा होचो वा सबैभन्दा अग्लो जस्त कुराको मात्र गिनिज रेकर्ड हुन्छ होला भन्ने सोच्ने गर्दथें । त रयस्तो पनि हुने रहेछ । भगवानको कृपाले मेरो सबै भाइबहिनी जिवित छन् । ’
कार्टर लगायत सबैको जन्म पाकिस्तानमा भएको थियो । क्यानाडामा जाने पहिलो तिनीहरुका सबैभन जेठा दाई थिए । उनले त्यहाँ राम्रो कमाइ गर्न थालेपछि परिवारका बाँकी सबै सदस्यलाई त्यहाँ बोलाएका थिए । तर ति मध्ये एक जना क्यालिफोर्निया र अर्को स्विजरल्यान्डमा बस्ने गरेका छन् ।
कार्टर बताउँछिन् , ‘ हामी बिच आजसम्म कहिल्यै मनमुटाव र झैझगडा भएको छैन । हरेक दिन बिहान एघार बजे हामीहरु सबै भिडियो कन्फ्रेन्समा भेट्ने गरोका छौं ।’ (एजेन्सी)
# गिनिज वल्र्ड रेकर्ड
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७, ११:०६:५७
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यी राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह गर्दा घातक !
जुत्ता पोलिस गरेरै कमाए महिनाको १८ लाख !
रुखमा उल्टो झुण्डिएर पूरै जीवन बिताउने विचित्रको अल्छे जीव
विश्वकै सबैभन्दा महँगो कारको मूल्य कति ?